माल्दिभ्स मा सबै भन्दा राम्रो होस्टलहरू सबै समावेशी
हाम्रो ग्राहक समीक्षा
माल्दिभ्सको सब भन्दा आरामदायक होटलहरू
फोटो होटल माल्लन्स
शुभ अपरान्ह! बाँकी धेरै राम्रो थियो, मलाई सबै मनपर्यो। म तपाईको कम्पनीलाई पहिलो पटक नभई नाटलियासँग काम गरें, सबै कुरा धेरै सरल थियो र चाँडै नै मलाई समाधान गर्न मद्दत गरियो! धेरै धेरै धन्यवाद!,
प्रसिद्ध माल्भेडभ्सहरू र उनीहरूको होटलहरू सही रूपमा ग्रहमा आराम गर्न उत्तम स्थान मानिन्छ। पर्यटक यहाँ आराम गर्न र सभ्यताको दूरीमा आउँछन्। यस्तो आराम सबैभन्दा कम किसिमको आर्थिक होइन, त्यसैले माल्दिभ्सले मानिसहरूको बाँकी भागमा मानिसहरूको ठूलो समूह छैन, बाँकी रिसोर्टहरूमा।
हाम्रो देशबाट राम्रो समृद्धि भएका धेरै व्यक्तिहरू माल्दिभ्समा छुट्टिहरू बिताउन खोज्छन्। यी टापुहरू हिन्द महासागरमा अवस्थित छन्, भूमध्यरेखाबाट टाढा छैन, वास्तवमा प्रमोदवन भनिन सकिन्छ। र प्लस टुरिस्ट पूर्वाधार यहाँ राम्रो विकसित भएको छ। यसको प्रमाण भनेको माल्दिभ्सको उत्तम होटलहरू सबै समावेशी, जुन हामीले तल डोर्याएका सूची हो।
पाँच-स्टार होटेल माल्भेडल "रास्किडीन" "धेरै टापुमा। तिनीहरू सबैको विलासी बंगला र अपार्टमेन्टहरू छन्। केही सामानहरू पनि टिकाऊ गिलासको फ्लोर हुन्छन्, जसद्वारा समुद्री गहिराइहरूको बासिन्दाहरूलाई हेरिरहेका छन्। एक नियमको रूपमा, धेरै भिल्लाहरू समुद्री तटमा व्यक्तिगत पहुँचको साथ सुसज्जित छन्। जटिल स्पा कन्टरहरू, पोखरीहरू, सभ्यताको अन्य "आकर्षणहरू" ले सुसज्जित छन्।
<< p> हाम्रो साइटमा तपाईं माल्दिभ्समा कुनै पनि होटल वा होटल छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग होटल छनौट गर्दा प्रश्नहरू छन् भने, तपाईं हाम्रो प्रबन्धकको साथ परामर्श प्राप्त गर्नुहुनेछ। र यदि तपाइँ चाँडै यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि चयन गर्नुहोस्। केवल हाम्रो साइटमा अनुप्रयोग बनाउनुहोस्, र व्यक्तिगत दृष्टिकोण हामी तपाईंलाई ग्यारेन्टी दिन्छौं!
माल्दिभ्स पर्यटन को सबैभन्दा लोकप्रिय क्षेत्र हो। नासास्टसोका मूल-्गलहरू होटलहरू हुन् जसको एक कोटीमा or र stars ताराहरूको एक कोटी छ, त्यसैले यहाँ बाँकी सबै उच्च स्तरमा आयोजना गरिनेछ।
माल्दिभ्स उनीहरूको धनी मनोरञ्जनको लागि प्रसिद्ध छ: मूल-किशोरीहरू एक हजार भन्दा बढी वेस्टमान्टिक टापुहरू छन्, वरिपरि जति अद्भुत कोरल रीफहरू अवस्थित छन्। प्रत्येक वर्ष त्यहाँ हजारौं पर्यटकहरू बीच वा डाइभिंगका लागि छन्। यी ठाउँहरू दुबै परिवार र जोडीहरूको लागि आदर्श हुन् - सबैजना आफैंको लागि चाखलाग्दो पेशा फेला पार्नेछन्।
सबै संग्रहमा पर्यटकहरूले पर्यटकहरूलाई रोक्न सक्ने धेरै होटलहरू निर्माण गरे र कुनै पर्याप्त पर्याप्तता भएकाहरूका लागि विकल्पहरू छन्। राजधानीबाट थुप्रै टापुहरूको दुर्गमतालाई दिइयो, छुटकारालाग्लाग्डरहरू छनौट गर्न रुचाउँछन्, माल्दिभ्स सबै समावेशी होटेलहरूमा जाने।
को सबै भन्दा विलासी होटल
लगभग सबै सबै भन्दा राम्रो होस्टलहरू छुट्टै टापुहरूमा अवस्थित छन् र निजी, राम्रोसँग सुसज्जित बलौटे बञ्जडी तटहरू छन्। प्रत्येक टापुमा पक्कै पनि एक निजी डुबुल सेन्टर हुनेछ, डु boats ्गा, डु boats ्गा र अन्य पानी यातायातका साथै स्को जटिल। माल्दिभ्समा5स्टार होटलहरूमा आराम गर्न छनौट गर्दै, परम्परागत होटेल मात्र होइन समुद्री तटमा वा पानीको घरमा समाधानको रूपमा विदेशी विकल्पहरू पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
car तारा होटेलमा सबै भन्दा राम्रो होटलहरूको सूचीलाई पुरुष टोओलमा थप्न सकिन्छ, जुन प्राकृतिक भलाइको प्रयोग गरिएको सुनार भिजेको छ। , र एक मात्र रेडी रह * * Drluxe, जसले मूल डिजाइनको लागि लोकप्रियता जित्यो - होटल अक्टोपस भरिएको छ। माल्दिभ्स सुव्यवस्थित-उपलब्ध होटलमा आवास बनाउनुहोस्, तपाईं एक धेरै सेयरहरू मध्ये एक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन नियमित रूपमा व्यवस्थित गरिन्छ।
03 लक्जरी -29 स्क्वारी मीटर। m
नि: शुल्क wi fi
निजी पोखरी :
एक नरम बलौटे समुद्री तट र एक चमकदार लगनको साथ केवल केहि चरणहरू छन्, तपाईंको समुद्री तटको आश्रयको आरामबाट प्रकृतिको साथ प्रकृतिको साथ प्रकृति छ। ध्यानपूर्वक सूक्ष्म माल्दिभ्स सजावटको साथसाथै सोचेको कुराले समान रूपमा सान्त्वना, शैली र स्थानीय स्वाद प्रदान गर्दछ। आराम गर्न, आराम गर्न र तपाईंको परिवारको समाजलाई आराम गर्न र रमाईलो गर्न एक आदर्श ठाउँ छनौट गर्नुहोस्।
आगमन मा, तपाईं प्रत्यक्ष मंल्याण होटेल सुइटमा जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। बटरको सामान्य सेवाहरूमा कूइल्ड चैम्पिंगका एक दैडबाट, प्रत्येक ट्रिफिल शान्तपूर्वक शान्त र निर्मल आराम प्रदान गर्न योजना गरिएको छ। त्यहाँ बेडरूममा एक मिबरन छ, जुन दिनको दुई पटक रक्सी, पेय, पानी, चकलेट र खाजासँग पुनः भम्प्त हुन्छ। त्यहाँ एक विशेष दाँत र गुलाबी वा गुलाबी मन्जाको साथ एक विशेष दाँत फ्रिज छ, कफि मेसिन र चिया हाल्नु बेसल।
बाथरूम दुबै बेडरूममा बाथरूम दुबै चकित बाथरूम ट्र्याक ट्र्याकहरू, बगैंचा र स्टाइलिश सजावटको साथ आश्चर्यजनक बाथरूमहरू छन्। काठको व्यर्थलाई कदर सिलस शौचालयहरू र विलासी अन्डरराइटले सुसज्जित छ। तपाईंको आफ्नै बगैंचामा तारामुनि हार्वेन्टको आनन्द लिनुहोस्। सुविधाजनक आधारभूत आवश्यकताहरू र नुहाउने क्रममा तपाईं समुद्रमा बिताएको दिन पछि आराम गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने चश्मानीतिक स्नान पनि छ।
माल्भेडहरू * * र Liks * होटलले स्वास्थ्य सेवाहरू, विभिन्न स्पाको उपचार, समुद्री खेल प्रशिक्षण सेवाहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रस्ताव गर्दछ। त्यहाँ तपाईं स्थानीय सुन्दरता, पानी सफारी, अन्य मनोरन्जन गर्न भ्रमणहरू पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ।
जीवित लागत को रूप मा, विलासी पाँच-तारा होमलमा मूल्य प्रति रात5हजार डलरमा पुग्न सक्छ।
बजेट विकल्पहरू (* ort0 होटेल र होस्टलहरू) $ 400 देखि $ 400 देखि $ 40 बाट लगातार उच्च माग हो। तर तिनीहरूलाई भाडामा, तपाईं स्थानीयहरू र विकसित पूर्वाधारको अभावमा जीवनको लागि तयार हुनुपर्दछ।
माल्दिभ्समा छुट्टीहरू वास्तविक परियत्ताको छनौट हुनेछ यदि तपाईं 5th औं ताराहरूको साथ होटलबाट रोज्नुहुन्छ भने।
<< p> तिनीहरू धेरै टापुहरूमा "छरिएका" छन्, लगभग सबैले महँगो अपार्टमेन्टहरू, बंगलाहरू, गिलास फ्लोरहरू र अन्य किशमिशहरूको साथ विशेष रूपमा सजाइएको कोठाहरू प्रदान गर्दछन्।
मस्को, सेन्ट प्याटर्सबर्ग र मूखणबर्गबाट ​​मल्डिभ्स गर्न कति उडान गर्ने? हामी बताउँछौं! प्रश्नको उत्तर मा खोजिरहेको छ।
फाइदाहरू: उत्कृष्ट सेवा र राम्रोसँग विकसित पूर्वाधार, पौंडी पोखरी, रेस्टुराहरू, संवेदनशील र ध्यान दिने स्टाफ।
<< p> हाम्रो विचारमा, यो होटेल शाखको सर्वश्रेष्ठ--साइजेटिक होटल हो। यसले यसको क्षेत्र र बाहिरका सांस्कृतिक र मनोरन्जन कार्यक्रम प्रदान गर्दछ। सेवाहरूको मानक प्याकेज भनेको विवाह समारोहहरू आयोजना गर्न, एक सानो नौट, स्पा छुट्टीमा सवारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
फाइदाहरू: राम्रोसँग राखिएका बीच, मूल कार्यक्रमहरू, मूल कार्यक्रमहरू र मैत्री कर्मीहरू, आरामदायक वातावरण, चाखलाग्दो भाग र बाहिरी भागहरू।
धेरै सुन्दर टापुहरूमा अवस्थित छ, चट्टानबाट टाढा छैन। होटलले आफ्नो पाहुनाहरूलाई "सबै समावेशी" प्रणालीमा आराम गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
त्यहाँ क्षेत्र मा धेरै आरामदायक बार र रेस्टुरेन्टहरू छन्। पानी र विधि को प्रशंसकहरु को लागी धेरै थप थप प्रदान गर्दछ।
Vallsaaru माल्डिभ्स, न्युशास टापुमा अवस्थित दक्षिण पुरुष टाटामा अवस्थित। टुर मूल्य: $ 000000 बाट, कोठाको संख्या: 12 UR अलग भिन्ताहरू र बंगलाउन्स, साथै पानी बंगलाहरू।